Te-Hitolo-Batana Any Shina Indray Ilay Mpitolon’i Tiananmen Saingy Voatosi-Bohontanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2013 14:29 GMT
@zuola namoaka ny sarin'i Wu'er Kaxi nalaina tamin'ny filazana jiolahy tadiavina vita printy tamin'ny gazety lehibe 24 taona lasa izay.
Wu'er Kaixi, mpianatra nanaovana fitadiavana tamin'ny hetsi-panoherana demokratika tao Tiananmen tamin'ny 1989, no nitolo-batana tamin'ny fitondrana any Hong Kong nandritra ny fiampitana tamin'ny dia avy any Taiwan ho any Bangkok. Nangataka ny ho aondrana any Shina Tanibe izy amin'ny maha-mpandositra azy.
Efa imbetsaka ny tenany no niezaka ny hitodi-doha any Shina hatramin'ny 2009 tao anatin'ny fanentanana nataon'ny Reverend Chu Yiu Ming tamin'ny 2007 hampodiana ireo sesintanin'i Tiananmen. Ny fanentanana “Fampodiana” dia ny hanohanana ireo mpikatroky ny demokrasia nanao sesintany hody sy ho tafaraka amin'ny fianakaviany.
Tamin'ny 2009, nolavina ny fidiran'i Wu'er Kaixi ho ao Macao; tamin'ny 2010 nosamborina noho ny fiezahany hiditra tao amin'ny Ambasady Shinoa tao Tokyo izy, ary tamin'ny 2012 dia tsy noraharahian'ny Masoivoho Shinoa izy rehefa nitolo-batana tany Washington D.C.
Toy ny teo fikasana teo aloha, tsy mbola nahomby hatrany i Wu'er Kaxi tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy nanaiky ny hidirany ny governemanta tao Hong Kong, ka nandroaka azy niverina tany Taiwan taoriana kelin'ny fahatongavany.
Nanoratra toy izao tao amin'ny Twitter i Wu’ er Kaixi tokony ho tamin'ny iray ora folakandro:
Eto amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena eto Hong Kong aho amin'izao fotoana izao. Nankao amin'ny fitondrana tao an-toerana aho ary niteny azy ireo fa mpandositra izay karohan'ny fitondrana Shinoa ka te-hitolo-batana. Eto amin'ny faritra fisavana fifindramonina aho amin'izao fotoana izao. Ato ny fanambarana feno ataoko: wuerkaixi.com
Tamin'ity indray mitoraka ity i Wu'er Kaixi dia niaraka tamin'i Albert Ho, mpanao lalànan'ny Antoko Demokratikan'i Hong Kong ary mpitarika ny Zivan'i Hong Kong Manohana ny Hetsika Demokratika Tia Tanindrazana Ao Shina.
@wenyunchao, mpikatroka politika ao Shina Tanibe monina ao Etazonia amin'izao fotoana izao, namoaka ny sarin'i Wu'er Kaixi sy Albert Ho nopihana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Taipei nialoha ny niaingany ho any Hong Kong ary nampiasa ny diezy (teny ifankafantarana) #Homecoming:
Wu'er nanazava ny antony nahatonga azy hitolo-batana tao amin'ny fanambarana nataony tao amin'ny bilaogy:
Hatramin'ny 1989, izany hoe efa 24 taona izao no efa sesintany aho ary tsy afa-nijery ny ray aman-dreniko na fianakaviana hafa. Efa antitra ny ray aman-dreniko ary marefo ny fahasalamany. Tsy manaiky ny hamoaka pasipaoro ho azy ireo hivoaka aty ivelany hitsidika ahy ny governemanta shinoa. Nolazaina mazava ny ray aman-dreniko fa ny antony tsy amoahana pasipaoro ho azy ireo dia noho ny zanany lahy mpisintaka ara-politika. Te-hanontany ny fitondrana shinoa aho, mifanaraka amin'ny lalàna iraisampirenena izay nosoniaviny ve izany; mety eo anatrehan'ny soatoavina nentim-paharazana shinoa ve izany; mifanaraka amin'ny lalànan'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina ve izany?
Mino aho fa ny valin'ireo fanontaniana ireo dia tsia, ary izany no mahatonga ahy tsy mahita atao afa-tsy ny hoe izaho mihitsy no miverina. Malahelo ny ray aman-dreniko aho ary manantena fa mbola tafavory indray izahay dieny mbola velona ry zareo, eny fa na dia ho ambadiky ny rindrim-pitaratra aza no hisian'izany fihaonana izany.
Nohazavainy ihany koa ny antony nahatonga azy hisafidy an'i Hong Kong ho toeram-pidirana:
Hatramin'ny 2009, nanao toy izao aho tany Macao, tany Japana ary tany Etazonia hidirako any Shina na any amin'ny masoivoho shinoa mba hiatrika mivantana ny fiampangan'ny governemanta shinoa, saingy tsy navela hatrany aho. Izao ataoko izao dia avy amin'ny fahadalan'ny fanapahan-kevitry ny governemanta mandefa taratasy fisamborana ahy nefa mandrara ahy tsy hiverina.
Koa raha heverina fa mankatoa ny toerana ofisialin'ny Shinoa ny governemantan'i Hong Kong, izay mametraka ny fandraisako anjara tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 1989 ho “tsikombakomba hanonganana ny governemanta”, ka mahatonga ahy ho meloka noho ny “fandrisihana hanohitra ny revolisiona”, dia tokony nanaiky ny fangatahako izy ary hanampy ny governemanta shinoa amin'ny fisamborana ahy. Fantatro fa faritra iraisampirenena ny toeram-pifindrana ao amin'ny seranampiaramanidin'i Hong Kong, saingy eo ambany lalànan'i Hong Kong, ary tokony mba hijery ny fangatahako hitolo-batana farafaharatsiny ny manampahefana ao Hong Kong.
Raha mandà ny fangatahako ny fitondrana ao Hong Kong, ka tsy misambotra ahy ary tsy manampy ny governemanta shinoa hisambotra ahy, dia raisiko izany ho tsy fankatoavan'ny fitondrana ao Hong Kong ny didy ofisialy navoakan'ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina momba ny hetsiky ny mpianatra tao Tiananmen. Raha izany, dia ekeko, ary dia mitaky ny fitondrana ao Hong Kong aho hampitsahatra ny fandavana ny Shinoa mpisintaka ny zony hiditra ao Hong Kong, hanome ahy fotoana hitolorako tena any amin'ny biraom-pifandraisana shinoa ao Hong Kong
Raha ny marina moa dia tsy mila manazava ny fijoroany ara-politika manoloana ny fihetsiketsehan'ny mpianatra tamin'ny 1989 ny fitondrana ao Hong Kong rehefa tsy nanao sonia fifanaraham-pamerenana hampody [zh, pdf] ireo voaheloka tamin'ny governemantan'ny Shina Tanibe izy. Saingy, tsy namela ireo Shinoa nisintaka maro fanta-daza ny manampahefana misahana ny fifindra-monina hatramin'ny namerenana azy amin'i Shina. Tamin'ity indray mitoraka ity moa izany dia nolavina ihany koany fidiran'i Wu'er Kaxi ka nandao ny seranam-piaramanidin'i Hong Kong izy ka niverina nankany Taiwan tokony ho tamin'ny efatra ora folakandro.
Na dia fohy aza ny fotoana nijanonan'i Wu'er Kaixi tao Hong Kong,dia niteraka adi-hevitra sy fanehoan-kevitra maro izany. Francis Chan naneho ny “mandrosoa” mafana tao amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny tatitry ny Housenews:
Nanambady Taïwaney izy ary manana pasipaoron'i Taiwan ka tokony heverina ho Taiwaney. Tongasoa izy. Avelao izy hidira hizara ny zava-niainany amin'ny tanora. Raha nanakombom-bava izy ary niondrika ambany tamin'ny mey-jona 1989, dia mety ho mpandovabe. Olona [Uighur] ambony tamin'ny asany tao Xinjiang ny rainy
Na izany aza, olona vitsy ihany no nankasitraka ny fihetsika nataon'i Wu'er Kaixi. Maro no naneho ny fahadisoam-panantenany manoloana ireo mpisintaka. Kelvin Kwok Fung Tang ohatra namoaka indray ity fanehoan-kevitra iray ity tamin'ny rojom-baovao maro tao amin'ny Facebook:
Mahalala ny rehetra fa tsy manana fihetseham-po ny [Antoko Komonista Shinoa]. Saingy te-hanova an'i Shina tokoa ve i Wu'er Kaxi? Moa ve nivondrona hanova an'i Shina ireo Shinoa mpisintaka maro avy amin'ny Shina Tanibe izay novonjen'ny vahoakan'i Hong Kong? Tsia. Maro tamin'izy ireo no nahazo ny diplaoman'ny Oniversiteny tany ampitan-dranomasina, nanambady, nisara-bady ary nahangona volabe. Ankehitriny efa antitra ny ray aman-drenin'izy ireny, dia nanenina ry zareo. Nandiso fanantenana anay sy ny hevitry ry zareo ihany ry zareo. […] Eto aho manontany an'i Wu'er Kaxi, nandritra izay 20 taona izay, inona no vitany tany Taiwan sy tany Etazonia ho fampandrosoana ny demokrasia any Shina.